အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: 2015
ချစ်တာ အပြစ်လား? Goodbye ……my love
ခုတလော မယားငယ် ကိစ္စတွေ၊ လင်ရှိယောက်ျားကို ရည်းစားတော်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောက်ျားကိစ္စတွေ အများအပြားကြားရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ သခွပ်ပင်က မီးကျီကျီ ဆိုသလို ပေါ်လာတဲ့ ဥပဒေ အသစ်က တမှောင့်ပေါ့လေ။ ထားပါတော့ ပြောချင်တာက ခုနက မယားငယ် ကိစ္စတွေ ရည်းစား ကိစ္စတွေ နှစ်ပေါင်များစွာ တွဲလာပြီး တော့မှ ယူဖို့ ကျတော့ နှောင့်နှေးနေတဲ့ တွေဝေနေတတ်တဲ့ မောင်တို့ ယောက်ျားတွေ အကြောင်း နည်းနည်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။
မနေ့ကလဲ တရုတ်ကား တကားကြည့်ဖြစ်တယ်။ တရုတ် နဲ့ ကိုရီးယား ပေါင်းရိုက်ထားတာ (စုန့်ဟွေ့ချောဝ်)လို့ခေါ်တဲ့ အွန်စောလဲပါတယ်။ သူက မင်းသမီးပါ။ မိန်းမတွေ ရဲ့အချစ် အပေါ် အောက်ကျ နောက်ကျ နိုင်မှု နဲ့ နှာခေါင်းမပါရင် ချီးစားမယ့် အမှုတွေကို ရှုထောင့် ပေါင်းစုံက ရိုက်ပြထားတာပါ။ မနာပါနဲ့ ချစ်လုိ့ပြောတယ်မှတ်ပါ။ မိန်းမတော်တော်များများ ဟာ သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်မှု၊ နုပျိုမှုတွေကို ဦးနှောက်မပါမှုတွေ အချစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ပြီး လဲပစ်နေကြတာပါ။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် မသေချာတဲ့ မပိုင်နိုင်မှု၊ မပိုင်ဆုိုင်နိုင်မှု တွေကို အချစ်လို့ ပုံရိပ်ယောင်ထင်နေကြတာ။ ကိုယ့်ကို တာဝန်ယူမှာ မယူမှာ မသေချာတဲ့ ယောက်ျားတယောက်ကို တချိန်တော့ သူငါ့ကို ယူမှာပါလေ ဆိုတဲ့ အတွေးမှားတွေ နဲ့ စောင့်နေတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့နနယ်ပျိုမြစ်မှုတွေကို မီးရှို့ပစ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အချိန်ဖြုန်း မှု သက်သက်တွေရယ်ပါ။
ဒီနေ့လဲ ခုနကပဲ တရုတ်ရုပ်ရှင် တကားကြည့်နေတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောင်မလေးက လေယာဉ် ကပ္ဗတိန်နဲ့ ကြိုက်နေ၊ တွဲနေ လစ်ဗင်းတူဂဲသား နေနေကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တနှစ် စောင့်တယ် မယူဘူး၊ နောက်တနှစ်စောင့်တယ်၊ ဘာစကားမှ မဟဘူး၊ မစဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နှစ်တွေ ကြာသွားပြီ။ သူလဲအသက် ၃၀ နားနီးလာပြီ။
မ - ရှင်တခါမှ ကျမ ကို လက်ထပ်ယူမယ် လို့ မစဉ်းစားထားဘူး မှလား
ကျား - မင်းစကားတွေကို မလွဲပါနဲ့။
မ - ကျမ မေးတာကို ဖြေပါ။
ကျား - မင်း က ဘာတွေ လောနေတာလဲကွာ။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်လုံခြုံမှု မရှိတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ချစ်သူကို ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ စာရွက်တရွက် နဲ့ တယောက်ကို တယောက် ချည်နှောင်ချင်ကြတာပဲ။ ဘာများ အဓိပ္ဗါယ်ရှိလို့လဲကွာ။
မ - ရှင့်ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ကျမ ကို ချစ်တယ် ပြောနေပြီးတော့ စာချုပ်လေး နဲ့ အဲ့တာ ကို သက်သေပြဖို့ကျတော့ အဲ့လောက်တောင် ခက်နေလား။ ရှင်ဘာကို ကြောက်နေတာလဲ။ ဒါမှ မဟုတ် အချိန်မရွေး နောက်ပြန်လှည့် လို့ ရအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တကွက်ချန်နေတာလား။ နောက် နှစ် ဆို ကျမ ၃၀ ပြည့်ပြီ။ ဒီတလထဲမှာပဲ ကျမ ကျောင်းတုံးက သူငယ်ချင်း ၅ ယောက် ဆီကနေ ဖိတ်စာတွေရတယ်။ ၃ ယောက်က မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်ဖိတ်စာတွေ။ တယောက်က ကလေး ရက် (၁၀၀) ပြည့် ဖိတ်တာ။ နောက်တယောက်က မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ဖိတ်စာ။ ဒါပေမယ့် ဒီဖိတ်စာက သူ့ရဲ့ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ဆောင်မှာ။ ဒီကိစ္စ ကို ရှင်နဲ့ပြောတိုင်း စောင့်ပါဦး စောင့်ပါဦး နဲ့။ ကျမ က ဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်မယ့် ပန်းတိုင်ကို ပြေးနေရသလိုပဲ။ ကျမ ပြေးရတာ မောလှပြီ။ ကျမ ဆက်ပြီး မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ ကျမ မီခိုနိုင်မယ့် ပခုံးတခု လိုချင်ပြီ။ ကျမ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတခု မိသားစုလေး တခုလိုချင်ပြီ။ ကျမ မှားသလား?။
(ဒီနေရာမှာ တခုပြောချင်ပါတယ်။ ခေတ်တွေပြောင်းလဲပြီး ပွင့်လင်း လွတ်လပ်လာကြတာ လူတွေက အိမ်ထောင်တခု အလွယ်ထူထောင်ဖို့ ခက်လာကြပါတယ်။ စီးပွားရေး မပြေ လည်ရင် ယူဖို့မလွယ်တာ။ လူမှုရေး ကိစ္စတွေကြောင့် မယူနိုင်ကြတာ။ အတ္တတွေပိုကြီး လာကြတာ။ ငါစွဲလာကြတာ။ လူတယောက် ကို တရားဝင် လက်ထပ်ယူပြီး တာဝန်ယူ ဖို့ထက် ဖြစ်နိုင်ရင် မယူဘဲ အတူနေကြ တွဲကြ။ အဆင်ပြေတော့ မှ လက်ထပ်ကြ။ ကလေးရမှ မယူမဖြစ် ယူကြ။ အလုပ်ကို ဦးစားပေးကြ၊ ဘဝတိုးတက်မှုကို ဦးစားပေးကြ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ တီ ကိုယ်တိုင်လဲ အမှန်တော့ မယူဘဲ အရင် အတူနေကြည့်တာကို အားပေးပါတယ်။ သို့သော် ဆိုလိုချင်တာက လေ့လာဖို့ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ တယောက်နဲ့ တယောက်အဆင်မပြေရင် ကွဲရတာလွယ်တယ် ကွဲလိုက်တာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်စေ မိန်းမ ဖြစ်စေ အပျို လူပျို ပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ တခုလပ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ နောက်အိမ်ထောင် ထပ်ပြုတယ်ဆိုလဲ အိမ်ထောင် နှစ်ဆက် တို့ ဒုတိယ အိမ်ထောင်ပေါ့ ဆိုတဲ့ အမည် တပ်မှုတွေကို မလွဲမသွေကြုံရမှာပါ။ မယူဘဲ အတူနေတော့ လေ့လာလို့ရတယ် အဆင် မပြေလို့ လမ်းခွဲရင်တောင် သူသူကိုယ်ကိုယ် အပျိုလူပျိုပဲ ဖြစ်လို့ အရင်က အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ ရည်းစားထားခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာလောက်ပဲလေနော်။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာကို လေ့လာဖို့ နဲ့ အတူနေမှု ကို မျှော်လင့်ချက်အမှားတွေ နဲ့အချိန်ဖြုန်းတာနဲ့ တော့ သေသေချာချာ ကွဲစေချင်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဘဝမှာ တကယ့်အလွဲတွေက ဖြေရှင်းရခက် ပါတယ်။ မိန်းမတွေကို အလဟသတ် အချိန်တွေ မဖြုန်းစေချင်တာပါ။ ယောက်ျားတွေ အတွက် တော့ အထွေအထူး ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတယောက် အသက် ၄၀ ကျော် (တော်တော်လေးကျော်) တောင် သူ့ထက် အသက် တဝက်ငယ်တဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ ရပါတယ် ပြောချင်တာ မိန်းမတွေလောက် ယောက်ျားတွေက တန်ဖိုးကျမလွယ်ဘူး။
မိန်းမတွေရဲ့တန်ဖိုးက ၁) မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု၊ ၂) ဉာဏ်ပညာ နဲ့ မိမိဘာသာ ရပ် တည်နိုင်မှု ၃) ငယ်ရွယ်နုပျိုမှု စတာတွေပါပဲ။ အမှတ်စဉ် တပ်ထားပေမယ့် အရေးအကြီး ဆုံးက နောက်ကနေ ပြောင်းပြန်ရေရမှာပါ။ အရှေ့ကဟာတွေက ဘယ်လိုပဲ လှအောင် ပြောပြော ရေးရေး ယောက်ျားတွေအမြင်မှာကော မိန်းမတွေအမြင်မှာကော အရေးကြီးတာ နောက်ဆုံးက တချက်ပါ။ အဲ့တာကြောင့် ယောက်ျားတွေကလဲ မိန်းမတွေရဲ့ အလှပတရား ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမတွေကလဲ (ကိုယ့်အတွက်လို့) ဘယ်လိုပဲ နာမည်တပ်တပ် လှအောင်နေကြ ဖန်တီးကျ ပြုပြင်ယူကြပါတယ်။
(စာပေဟောပြောပွဲဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ လက်ခုပ်တီးရမှာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး ရှင့်)
အဲ့တော့ နောက်ဆုံးမှာ မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းများစွာ ရင်မှာ ပွေ့ပြီး တစောင့်တည်း စောင့်နေ တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ဒီစာလေး နဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။
ကျမ ရှင့်ကို အချိန်တစ်ခု ပေးခဲ့တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ရှင့်ဆီက ဘာမှ ဆက်သွယ်မလာတဲ့ အတွက် ကျမ သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ ချစ်သူ။ ကျမ တို့ အတူတူ ကာလအတော်ကြာ နေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ နေ့ရက်တွေ အချိန်တွေ ကျမ သိပ်ပျော်ခဲ့ရပါတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဘဝက ကျမ ထင်သထားသလို ဖြစ်မလာမှတော့ ကျမ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်။ ကျမ ရှင့်အတွက် အချိန်တွေ၊ ကျမ ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေ အများကြီး စတေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအိမ်ကလေးထဲမှာ၊ ဒီမြို့တော်ကြီးမှာ၊ ဒီအလုပ်မှာ ကျမ အတွက် ရှင့်ကို သတိရစရာတွေ၊ အမှတ်ရစရာတွေသိပ်များလွန်းပါတယ်လေ။ အဲ့တာကြောင့် အဲ့တာတွေ အားလုံးကို ကျမ ပြည်ဖုံးကားချ ဖို့ လိုအပ်ပြီလို့ ကျမ တွေးမိတယ်။ ရှင့်အတွက် ကျမ အချိန်တွေ အများကြီး စတေး ခဲ့ပြီးပြီ။ ခုတခေါက်တော့ ကျမကို ကျမ အတွက် စဉ်းစားခွင့်ပြုပါချစ်သူ။
Oct 6th 2015,
D Lax Spa | Yangon
Posted by Addy CHEN at 12:31 AM No comments: Links to this post
မန်းလေး မူလလက်ဟောင်း နှစ် (၃၀) ကျော် ဒေါ်တော မုန့်တီ
ကဲကဲကဲ ဒီတခေါက်တော့ အားလုံးက မျှော်နေကြတဲ့ ဒေါ်တော မုန့်တီ (မန်းလေးအခေါ်) ရန်ကုန်မှာတော့ နန်းကြီးသုပ်ပေါ့ လေးရေးပေးပါမယ်။
စိတ်မကောင်းစရာ တခုက အဲ့လို အင်မတန် အရသာရှိတဲ့ မနက်စာလေးတွေ ရန်ကုန်မှာ ပေါပေါသောသော မရတာပါဘဲ။
ကမ်းနားအောက်လမ်း ၂၆ လမ်းဆုံးထောင့်နား ဆက်သွားရင် လှေဆိပ်ပဲ ရှိတော့တယ်။ သွားတာတော့ တော်တော်မှ တော်တော့ကို တမျှော်တခေါ်သွားရတာပါ။ တီတည်းတဲ့နေရာကနေဆို မန်းအခေါ် ၇၅ ပြ လောက်ရှိမလားပဲ
တခါက မရွှေဇင် (ဘလောခ်ဂါ မရွှေဇင်ဦး နဲ့ စည်းစိမ်ရှင် တို့ညီအမ လိုက်ကျွေးလို့ စားဖူးတာပါ) သူ့အရင်က စားဖူးတာက စိုးစိုးမုန့်တီ။ စိုးစိုးမုန့်တီလဲ စစားဖူးခါစက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အဲ့တုံးက သူက ဒညင်းသီးစေးစေးလေးလဲရပါတယ်။ စာကလေး ဒညင်းသီး ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော် ဘက်ကလာတယ်ဆိုတယ် အဆိုတော် ကြိုးကြာက တခါစားရင် အလုံး ၅၀ လောက် တထိုင်ထဲစားတယ် ပြောတယ်။ စားနိုင်လောက်တယ် သူက သေးသေးလေးပဲ ပဲကြီးလှော်ထက် နည်းနည်းပဲ ကြီးတာကိုး။ နာမည်ကိုက စာကလေး ဒညင်းသီးလေနော် သိမ်းငှက် ဒညင်းတို့ ငှက်ကြီးဝန်ပို ဒညင်းတို့ မှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ထားပါတော့
နောက်ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် Rဇာနည်က ရန်ကုန်ကနေ မှာစားလို့ စိုးစုိုး မုန့်တီကို လေယာဉ် နဲ့တောင် ပို့ပေးရတယ် ဆိုပဲ မာရီယာကာရေး အေဗီယန် နဲ့ ရေချိုးဖို့ လေယာဉ် နဲ့သယ်လာတာထက် ဆိုးနေပြီ သို့သော် နောက်အခေါက်တွေ ထပ်သွားစားတော့ လုံးဝ ကိုမကောင်းတော့တာ စိုးစိုးပါ မှိုပေါင်းထုပ် ငါးဖယ်ပေါင်းထုပ်တွေလား ထပ်ရောင်းပေမယ့် မုန့်တီကတော့ ပျက်တာမှ ပစောက် ယပင့် ကသတ် ပျက်ပဲ ဆိုင်တွေကလဲ လာစားတဲ့ လူတွေများလာရင် မထိန်းနိုင်တော့တာ သိပ်ဆိုးတယ်
ဒီတခါ ခေါ်သွားကျွေးတာကတော့ သူငယ်ချင်း မင်းခန့်ပါ ။။။
ခု ဒေါ်တော ကတော့ ရှယ်ပါပဲ။ ရှယ်ရဲ့ ရှယ် စူပါရှယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ် မုန့်တီ (နန်းကြီး)ကို အမဲသား အမဲကျော် နဲ့ ရတာ သူ့တဆိုင်တွေ့ဖူးသေးတာပဲလေ။ ကြက်သဲကြက်မြစ် နဲ့ လဲရပါတယ်။ ငါးနဲ့လဲရပါတယ်။ အဲ့တော့ လူမျိုးဘာသာမရွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ဆိုတာ သူမှ အစစ်ပေါ့လေ။
နန်းဆိုလဲ ကြီးလတ်ပြား အကုန်ရပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲလဲရတယ်။ ဟင်းရည်ကတော့ မန်းဆန်ဆန် ပိတ်ဆွယ်နဲ့ပါ တီကတော့ အဲ့ဒီ ပိတ်ဆွယ်ဆိုတာကို ကြိုက်ကိုမကြိုက်တာပါ ငှက်ပျော်အူ အတုလို့ပဲ ခံစားရတယ်။ သို့သော် တူတော့ မတူပေဘူး။ ပုံစံတူတယ် အရသာတူတယ်လေ။။။။။
ပြီးတော့ ဟင်းရည်ထဲကို ကြိုက်တတ်ရင် ငါးဖယ်လုံးထည့်လို့ရပါတယ်။ ပထမ တော့ သူ့ငါးဖယ်လုံးကို CP တွေ ထုံချိုင်းတွေဖြစ်နေမစိုးလို့အထင်တကြီး မစားမိဘူး…….ဒီတခေါက်သွားစားတော့မှ အလကားပဲတင်း အပိုတွေထည့်ပေးတာ အမဲကျောတွေကော ကြက်မြစ်ကြက်သည်းတွေကော ဟင်းရည်ထဲမှာ ငါးဖယ်လုံးတွေ ကော တီချမ်းတို့များ နာမည်တွေကြီးတာ ရောက်လေရာ အလကားတုတ်ရတာများနေပြီပဲ။
အော် ပြီးတော့ ဟင်းရည်ထဲ နူးနေအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ ကြက်လည်ချောင်း တောင်ပံရိုးတွေကိုလဲ သုပ်ပေးပါတယ်၊ ကြက်သည်းမြစ်ထည့်သုပ်လဲ သိပ်ကောင်းတယ်
အပိုပြောတယ်ထင်ရင်လဲ ပုံတွေကို ကြည့်ပါ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့စားချင်စရာမှလား…..တီကတော့ တီ့ထုံးစံအတိုင်း အချိုမှုန့် မလျော့ခိုင်းပါဘူး။ အဲ့တာမှ အရသာ ပြည့်ဝတာ သူငယ်ချင်းကတော့ စားနေကြပုံစံ မှာစားတော့ အချိုမှုန့်တွေ လျော့တာ အရသာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ စားရတာ ပါးစပ်မပါလိုက်တာ ဆိုတာလေ……
စကားမစပ် သူငယ်ချင်း အဖွားတယောက် တသက်လုံး အချိုမှုန့်စားတာပါပဲ အသက် ၉ ၀ ကျော်ထိ နေသွားတယ် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့နော်
အပိုတွေလုပ်ပြီးတော့လဲ အထူးတလည် လျော့စားနေစရာမလိုပါဘူးနော် တီတို့ ရှမ်းပြည်ဘက်ဆို ပဲပုပ် (တက်စာ) ဆား (သွေးတိုးစာ) အချိုမှုန့် (ပြောကြည့်) ငြုပ်သီးမှုန့် (မှိုနိုင်းချင်း) တွေအကုန် ရောသမမွှေပြီးမှ မကောက်သီး ခေါ် ပင်စိမ်းသီးလေး နဲ့ တို့တို့စားတာ ဆွေမျိုးမေ့ပေါ့အေတို့ရယ်…….
အဲ့တော့ တီကတော့ ဘယ်သူဘာပြောပြော
ယူဝါရှုဝါ အိချိယို အာဂျီနိုမိုတို…….ပါပဲနော်
03:00 AM 30th Jul 2015
Posted by Addy CHEN at 11:03 AM 1 comment: Links to this post
Labels: တီချမ်း ခရီးသွားခြင်း
(ပုံတွေတင်ရတာ အဆင်မပြေဘူး ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ ပြောပြကြပါ။ ခုတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဒီလိုပဲ တင်လိုက်တယ်)
မန်းလေးကို ၂၃ ရက်နေ့မှာ အလုပ်ရှိတော့ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လေယာဉ်နဲ့ တက်လာပါတယ်။ ရောက်တဲ့နေ့က စားတဲ့ မြင့်လွင် တုတ်ထိုးတော့ တင်ပြီးပါပြီနော်။ နောက်ထပ်တင်စရာတွေလဲအများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဗထူး မြီးရှည်၊ ဒေါ်တော မုန့်တီ၊ မစီမာ အချဉ်ပေါင်း၊ ကော့ချောင်မြီးရှည်၊ ဆိတ်ကင် စမူဆာသုပ်၊ အကင်၊ ဂဏန်းချက်၊ နန်းရှေ့ ဝက်ဆီဖတ် မုန့်ပစ်စလက် အများကြီးဆို အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့တော့ မေမြို့တက်လည်ကြဖို့ သူငယ်ချင်းက ခေါ်တာနဲ့ တက်လာခဲ့ကြတယ်။ မန်းလေးကို သဘောကျတာ တခုက အဲ့လို နေ့ချင်းပြန်လေးတွေအလွယ်တကူသွားလို့ ရတဲ့ လည်စရာ ပတ်စရာ နေရာတွေသိပ်များတာကိုပါပဲ။ တနေ့ကတောင် ဆည်တော်လေး ကိုသွားလည်ခဲ့သေးတယ်။ ရေးပါအုံးမယ် သပ်သပ်။
မန်းလေးကနေ ကားနဲ့ တက်လာတော့ ၂၁ မိုင်မှာ မနားဘဲ အနီးစခန်း တောက်လျောက် တက်လာပါတယ်။ ၂၅ မိုင်ကျော်လာတော့ ရာသီဥတုလေးက သိသိသာသာ ပြောင်းလာ တော့ အေးစိမ့်စိမ့်ကလေး ဖြစ်လာတာနဲ့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ “ရှိုင်းရှိုင်း” ဆိုတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ဆိုင်လေးမှာ ဝင်စားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆန်ဖွယ် ဆန်စေး ဂျုံ ဆန်ပြား အကုန်ရတာပါပဲ။ သို့သော် အသားကတော့ ကြက်သားတမျိုးပဲရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်ခေါက်ကြော်ကျတော့ ရောင်းတာပဲ။ လော့ဂျစ်ကို လိုက်မမီပါဘူးလေ။ ဟင်းရည်ကတော့ ဆူပါရှယ်ပဲဆရာ ကြက်ရိုးတွေက ပြုတ်ထားတာ နူးတောင်နေပြီ။ အရိုးနုလေးတွေနဲ့ စားရင် အိမ်ရှေ့ မင်းသား ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးကပ် အသားလေးတွေကို ပြင်ထွင်ပြီး ဟင်းရည်ထဲ ထည့်ထား တော့ သိပ်ချိုပြီး အရသာရှိတာပေါ့။ ပိုကောင်းစေတာကတော့ ငြုပ်ကောင်းလေးခတ်ပြီး နံနံပင်လေး ကျဲထားတော့ ဟင်းရည်ချည်းပဲတောင် ထိုင်သောက်နိုင်တယ် အဟုတ်။ တီကတော့ ဆန်ဖွယ် အရည်ဖျော်စားတယ်။ သူငယ်ချင်းလဲ အဖွယ်တပွဲ၊ နောက် နှစ်ယောက်သား မဝ တဝ ဆိုတော့ (နှစ်ယောက်သား မဝတဝလို့သာပြောရတယ် ဒါတောင် မန်းလေးက မထွက်ခင် ဟုိုတယ် နားက ရွှေပြည်မိုး ကဖေးမှာ မန်းမြီးရှည် တပွဲရယ် သူငယ်ချင်းက မုန့်တီသုပ်ရယ် ကော်ဖီ ဆိုင်နှပ် ခွက်ကြီးတယောက်တခွက်ရယ် စားခဲ့သောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။) ဆန်စေး အသုပ် တပွဲကို နှစ်ယောက် တယောက် တဝက် ထပ်စားကြသေးတယ်။ ဝက်ခေါက်ကတော့ ဟင်းရည်ထဲလဲ ထည့်သောက်တယ်။ အချဉ်နဲ့လဲ တို့စားတယ် ကောင်းမှကောင်းပဲ။
တီချမ်း အပိုပြောတယ်ထင်ရင် ပုံမှာသာ ကွကိုယ် ကြည့်ကြပါတော့ ပိတ်သတ်ရယ်။
ဆက်လက်ထွက်ခွာလာတဲ့အခါ မိနစ်ပိုင်းလောက် မောင်းရင်ပဲ အနီးစခန်းက သည်ဗျူး ဝအဝင်လမ်းကို ရောက်ပါတော့တယ်။
ရီဗျူး အဘောက် သည်ဗျူး
ဒီနေရာလေးကို သူငယ်ချင်းတွေသွားသွားနေကတည်းက သွားကြည့်ချင်နေမိတာ။ နေရာလေးက သာယာလှပလှသလို သည်ဗျူးဆိုတဲ့ အတိုင်း ဗျူးကောင်းကောင်းလေး နဲ့ပေါ့။ နေရာက မေမြို့ (သို့မဟုတ်) ပြင်ဦးလွင်နဲ့ နီးပြီးသကာလ သူငယ်ချင်းက ဒေသ ထွက်ကော်ဖီ ဆိုတာ သိပ်ကောင်းတယ်လို့
သတင်းပေးလာတော့ ကော်ဖီသရဲ ကိုယ့် အတွက် သိပ်ကို သွားသင့်တဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတယ်လေ။
ပြီးတော့ စာတွေဘာတွေမတောက်တခေါက်ရေးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သမား ကိုယ်က သည်ဗျူး မှာလာ ကော်ဖီလေးသောက် သာယာလှပတဲ့ ရှုခင်းလေး ရှုစား၊ Carrie Bradshaw လို ပန်းသီးလက်တော့ပ်လေးနဲ့ စာလေးရေးပေါ့………..ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ကူးယဉ် ပါသလဲဆို နယူးယောက်ခ် သွားတုံးကတောင် အခုလိုပဲ စင်ထရယ်ပတ်ခ်ထဲ မရောက် ရောက်အောင်သွားပြီး စက္ကူခွက်ကော်ဖီလေး နဲ့ ပန်းခြံ ခုန်တန်းလေးမှာ ပို့စ်တပုဒ်ရေးခဲ့ သေးတာပါ။ အဲ့တုံးကလဲ အတူတူသွားခဲ့ကြတဲ့ ဟိုးငယ်ငယ်လေး အရင်းခင်တဲ့ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြော ခုတော့ ဟိုးအဝေးကနေ ရေတွေ တဝုန်းဝုန်းကျနေတဲ့ ဓါတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်ကို မျက်စိနဲ့ ပဿာဒ ကျကျ ရှုစား၊ ရေကျသံ တဝုန်းဝုန်းကိုလဲ နားနဲ့ ဖရန ပီတိ သောတဆင် သာယာ လှပတဲ့ ရှုခင်း အေးစိမ့်စိမ့် ရာသီဥတုနဲ့ဆိုတော့ သာယာမှုက9တောင်မကပါ ပေါ့လေ။
ဆိုင်လေးက အနီးစခန်းနားက လမ်းခွဲလေးကနေဝင်လာရတာပါ။ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဝိပဿာနာကျောင်း ရှိတဲ့လမ်းပါပဲ။ ခုလောလောဆယ်တော့ လမ်းလေးက တော်တော် ဆိုးနေပါသေးတယ်။ သို့သော်လဲပြင်တော့ပြင်နေတယ် လမ်းတလျောက် ကျောက်တွေ ပုံထားတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်လေ။ အဝင်လေးနားသာ နည်းနည်းလေး လမ်းဆိုးတာပါ၊ အထဲဝင်လာတော့ လမ်းက ကောင်းတယ် မပြောသာပေမယ့် မြန်မာပြည်က လမ်းဆိုတော့ လဲ (ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့ တခြားတခြားသော အရာများလိုပဲ) လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းပြောတာကတော့ အဲ့လမ်းက ခင်းနေတာ လ ပေါက်နေပါပြီ တဲ့လေ။
ကဲ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဝိပဿာနာကျောင်းဘေးနားကနေဖြတ်ပြီးတော့ ကွန်ကရစ်ကုန်းလေး ကနေဆင်းပြီးရင်တော့ ရောက်ပါပြီ။ အနီးစခန်းနားက ကျတော် တောင်ပေါ်ဆိုပေမယ့် လမ်းတလျောက် မြေပြန့်လိုပဲ ခံစားရတာလေ။ အဲ့ကလေ လမ်းဘေးဖဲ့ဆင်းပြီး အထဲဝင် လာတော့ ဓါတ်တော်ချိုင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ချိုင့်ထဲမှာ ရှိတာကလား။ အောက်ဘက်ကို တော်တော်လေးကို ပြန်နိမ့်ဆင်းဝင်လာရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ရောက်ပါပြီ။ သူက ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပါ။ ဝင်းနဲ့ဘာနဲ့ သေသေချာချာ ကျကျနန ဆောက်ထားပြီးတော့ ဝင်ကြေးကောက်ပါတယ်။ ဝင်းထဲ ဝင်ဝင်ချင်းကတော့ ကားပါခ်ကင်ပါ။ ကားရပ်ပြီးရင် လာရောက် လည်ပတ်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ ကားပါတ်ခ်ကင်မှာပဲ ပတ်ပလစ်ခ် တွိုင်းလက် ကလေးရှိပါတယ်။ ခရီးဝေးကနေလာခဲ့တဲ့ သူတွေအဖို့တကယ်ကို အဆင်ပြေစေတာပါပဲ။
အဲ့ကနေမှ သည်ဗျူးပေါ်တက်တဲ့ အတက်ကလေးမှာ ဝင်ကြေးကောက်ပါတယ်။ တယောက် ၁၀၀၀ ကျပ်ပါတဲ့။ သည်ဗျူးရက်စထရန့်မှာ စားစရာစားရင် ပေးထားသမျှ ဝင်ကြေး ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကူပွန်သဘောမျိုးပါ ပြန်နှုတ်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ တီတို့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်လာတော့ ဝင်ကြေးက ၂၀၀၀ စားတဲ့ထဲက ကျသမျှမှာ အဲ့ ၂၀၀၀ ကို ပြန်နှုတ်ပေးမယ် အဲ့လိုပါ။ ကြည့်ရတာ တော်တော်များများက သည်ဗျူးကိုလာ ပြီး ဆိုင်မှာ ဝင်မစားကြပဲ ဗျူးကြည့် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးပဲ ပြန်သွားကြပုံရပါတယ်။
သည်ဗျူးကနေ ဓါတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန် (၃ ဆင့်ရှိတယ် ပြောပါတယ် တီကတော့ ပင်ပန်းမယ့် အလုပ်ဆိုဘာမှမလုပ် အိပ်တာနဲ့ စားတာပဲ လုပ်တာဆိုတော့ မသွားပါဘူး) အဲ့အထိ ဆင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ရေတံခွန်သွားတဲ့ ဝင်ကြေးက သပ်သပ်ပါ တဲ့ ၂၀၀၀ ထပ်ပေးရပါမယ်တဲ့။ မေးလိုက်သေးတယ် လမ်းတွေဘာတွေ သေချာ လုပ်ထား လို့လားလို့ ဝင်ကြေးတွေ ဒီလောက် တဖြတ်တဖြတ် ခဏခဏ ကောက်နေရအောင်လို့။ အမှန်တော့ တီတို့လို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးတတ်တဲ့ (ယေဘုယျ အပြော ရစ်တတ်တဲ့ အမှန်တော့ ကိုယ်တွေက ရစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ပေးရတဲ့ တန်ဖိုးအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဆားဗစ် ကိုလိုချင်တာပါ) ကပ်စ်စတမ်မာတွေက အဲ့လိုတွေ မေးရင် သင့်တော်တဲ့ အဖြေကို ဝန်ထမ်းတွေက မပေးနိုင်ကြပါဘူး။
အဲ့တာ အဲ့လို နေရာတွေ လုပ်ပြီး ဝင်ကြေး ကောက်ချင် တဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ လိုတာပါ။ တကယ် ဆို ကောက်မယ်ဆိုရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သေချာ လုပ်ပြီးတော့ ကောက်ရင် ဘယ်သူမှ မပြောနေပါဘူးနော်။ အခုလဲ မေးကြည့်တော့ လမ်းက အဲ့လောက် မကောင်း ပါဘူးတဲ့။ မကောင်းရင် ဘာလို့ အဲ့လောက် ပိုက်ဆံကောက်နေရတာလဲ လို့ဆိုတော့ ကျောက်တောင်တွေကို အောက်အထိ ပေါက်အောင် လမ်းက တော်တော်လေး ဖောက် ထားရလို့ပါတဲ့။ ဒီလိုဖြေရှင်းမှုကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။
တီက ရေတံခွန်ဆိုရင် နည်းနည်းကြောက်တယ်။ ငယ်ငယ် က ကျိုက်ထီးရိုး ကျောက်ထပ် ကို အောက်ကျောက်ထပ်အထိ လမ်းလျောက်သွားဖူးတော့ အဲ့ကတည်းက မှတ်သွားပါ တယ်။ တခါ မန်းလေး အေးရှားဝေါလ်ဂိတ် ပြင်ဦးလွင်အတက် အစနားက ဒေါ်သီ သနှပ်ခါး နတ်နန်းလေး မရောက်ခင်ဘေးကနေ ခွဲထွက်ရတဲ့ ဒီးဒုတ် ရေပြာဆိုလဲ ၁၂ ဆင့်ကို ရောက် တော့မယ် ရောက်တော့မယ် နဲ့ တော်တော် အလိမ် အညာခံပြီး တော်တော်တက်ခဲ့ရဖူး ပါ တယ်။ အဲ့ကတည်းက ရေတံခွန်ဆို သိပ်သတိထားတယ်။ ပင်ပန်းဆင်းရဲမယ့် အလုပ်တွေ ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူး။ (ထားသခင်မလေးက ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက လက်ကျော်မတင်း နေလာရတာဆိုတော့ ငဲငဲ)
လမ်းမှာ ခုနက ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားလာတာရယ် ခဏနေ မေမြို့ရောက်ရင် ထပ်စားဦးမှာနဲ့မို့ အများကြီး မမှာဖြစ်ဘဲ သူငယ်ချင်း အကြံပြုတဲ့ ဒေသထွက်ကော်ဖီ တယောက်တခွက်ရယ်၊ ငှက်ပျော်သီး နွားနို့နဲ့ ဖျော် Milk Shake ရယ် ချိစ် ဆင်းဒွတ်ရှ် တပွဲရယ် စားကြပါတယ်။
သည်ဗျူးမှာ သဘောကျမိတာကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အက်တီကျူပါပဲ။ အင်မတန်ကို ရည်ရည်မွန်မွန်ရှိပါတယ်။ တခုပဲ အပြင်မှာ မိုးတွေရွာထားတော့ ခုန်တွေက စိုနေတယ်။ သို့သော် ဗျူး လှလှ မြင်ချင်ရင် အပြင်မှာ ထိုင်မှသာရမှာမို့ (ဒီလောက် အဝေးကြီး လာခဲ့ပြီး မှတော့လဲ အထဲမှာတော့ မထိုင်ချင်ဘူးလေနော်) အပြင်မှာ ခုန်သေးလေး ချပေးပါဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခုန်အပိုမရှိတာကော ချပေးလိုက်ရင် လမ်းပိတ်မှာ စိုးတာ ရောပေါ့။ သို့သော် ရေတဝက်စိုနေတဲ့ ခုန်တွေကို ရေသုတ်ပေးလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွား ပါတယ်။ ခုနက ပြောတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အက်တီကျူ ကောင်းကြတယ်ဆိုတာ အဆင်ပြေ အောင် စီစဉ်ပေး နေတဲ့ တလျောက်လုံးက အပြောအဆို အမူအရာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ မျက်နှာ တချက် ပျက်တာ မဲတာ မရှိပါဘူး။ စားသုံးသူလဲ ကျေနပ်တာပေါ့။
ခုနောက်ပိုင်းတွေ့နေရာတာတွေက ကပ်စ်တမ်မာ ဆားဗစ် ညံ့ကြတာပါ။ ဆို်င်ရီဗျူးတွေ ရေးရင် မကောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေအကြောင်းလဲ ဝေဖန်ချင်ပါသေးတယ် သွားစားရမယ့် ဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် ဆိုင်မျိုးပေါ့။ အားပေးမှာလား???)
ဆိုင်က အင်တာနက် ဝိုင်ဖိုင်လဲ ရှိပါတယ်။ သို့သော် ထုံးစံအတိုင်း ဝိုင်းဝိုင်းလည်ပေါ့လေ။ ကွကိုယ်ပဲ တယ်လီနော လေး ထုတ်သုံးလိုက်တော့မှ အဆင်ပြေတော့တယ်။
ကော်ဖီ တခွက်ကို ပုံမှန် ၂၀၀၀ ပါ။ တီတို့က ခွက်ကြီးသောက်ချင်တယ်ပြောတော့ စီစဉ် ပေးပါတယ်။ သူက Double မရှိတော့ ခွက်အကြီးထဲ ထည့်ပြီး ၂ ခွက်စာ တောင်းလိုက် တာပေါ့။ Sandwich က တပွဲကို Cheese နဲ့ ရိုးရိုး ကို တပွဲ ၄၀၀၀ ပါ။ Banana Milk Shake က တခွက် ၃၅၀၀ ကတော့ ဈေးအနည်းငယ်ကြီးသလို ခံစားရပါတယ်။ သို့သော် လဲသူ့နေရာ အပြင်အဆင်နဲ့ ဆိုရင် ယူတဲ့ ဈေးက တန်သလိုပါပဲ။
ဆိုင်မှာ စိတ်တိုင်းမကျစရာတခုတော့ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုင်နဲ့တော့ မဆိုင်ပေမယ့် ပေါ်လစီ နဲ့ ဆိုင်တာပေါ့။ အမေရိကတို့ ဥရောပတို့မှာဆို စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေက ကလေးခေါ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လာရောက်စားသုံးတဲ့သူတွေအတွက် “ကြီးစွာသော” စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပဲလေ။ တချို့မိဘဆိုတာတွေကလဲ ပိုက်ဆံတတ်နိုင် လို့ ကလေးတွေသာ တပြွတ်မွေးထားတယ် ဘယ်လိုဆုံးမရမှန်းမသိကြ၊ အဲ့ဒီလို ဘောကျော့ ကလေးတွေကလဲ အိမ်မှာ အလိုလိုက်ထားကျတော့ ပြောမနိုင် ဆိုမနိုင်တွေဖြစ်၊ လူကြားသူကြားထဲသွားရင် ဘယ်လိုနေရမယ် ထိုင်ရမယ် ဆိုတာမျိုးက ဆုံးမထားခြင်းလဲမရှိ ဆုံးမရလောက်အောင်လဲအသိရှိပုံမပေါ်ဆိုတော့ကာ ဆိုင်မှာ လာစားသောက်ကြတော့ ကလေးတသိုက်ခေါ်လာ၊ အော်ဟစ်ဆူညံ၊ ကလေးဘာသာ ဘာဝ ဆူညံတာ သဘာဝကျတယ် အဲ့တာကြောင့် ခေါ်လာမယ်ဆို ကိုယ့်ကလေးကြောင့် သူများ အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် ထိန်းနိုင်ရမယ် မထိန်းနိုင်ရင် အိမ်မှာ ထားခဲ့ သင့်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် အထက်က ပြောခဲ့တာ အဆင့်ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေက နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ကလေး ခေါ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ ဆိုင်ရဲ့ စားသုံးသူအပေါ်ထားတဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုပြတဲ့ ပေါ်လစီ ပါပဲ။ ဒါက စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကြုံလို့ပြောတာပါ။ လေယာဉ် စီးတဲ့ အခါ ခရီးသွားတဲ့အခါ ဘတ်စ်တွေပေါ်မှာ ခဏခဏ ကြုံရပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်တိုင်းမကျတာ တခုက ယင်ကောင်တွေ သိပ်များတာပါပဲ။ ယင်မမည်းကြီး တွေတောင်လာပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်တော့ တောင်းတော့ လာထွန်းပေးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယင်ကောင်ကို မတွန်းလှန်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ သာယာနေသော အက်မော စဖီးယားလေးက ယင်ကောင်လေး တလူလူ နဲ့ပေါ့လေ။ သူငယ်ချင်းနဲ့တောင် မန်းလေး ကနေ တက်လာရင် လမ်းပေါ်မှာ ပြောဖြစ်ပါသေးတယ်။ မေမြို့အပြင်က ဒီဇင်ဘာ ခြံ ဆိုလဲ ယင်ကောင်တလောင်းလောင်း နဲ့ စားရတာတောင် ရွံပါတယ်။ တခါတခါ သွားစား ချင်စိတ် ဖြစ်လို့ ယင်ကောင်တွေအကြောင်းတွေးမိရင် သွားချင်စိတ်တောင် ပျောက်ပျောက်သွား ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေဒီကိစ္စကို တခုခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ခြုံပြီးပြောရင်တော့ သည်ဗျူးသည် ရီဗျူး တခုတ်တရ လာရေးရလောက်အောင်တော့ ဗျူးက တန်ပါတယ်။ တီ့ စာဘတ်ပိတ်သတ်တွေလဲ ကြုံရင် တခါလောက်တော့ ဝင်လည် ကြည့်သင့်တယ် လို့ ရက်ကောမန် လုပ်ပါတယ်။
Posted by Addy CHEN at 4:50 PM 1 comment: Links to this post
မန်းလေး မူလလက်ဟောင်း နှစ် (၃၀) ကျော် ဒေါ်တော မုန့်...